कांग्रेसलाई मन्त्री बाँस्कोटाको प्रश्न -'के कांग्रेस दिनभरी बीपी रातभरी विप्लव हो ?'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले हिंसाप्रति नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो भन्दै प्रश्न गरका छन् । बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले हिंसा भइरहेकोप्रति कांग्रेसले नदेखेझै गरेर एकोहोरो सरकारलाई खेदेको आरोप लगाए ।
उनले भने, 'हिंसाको बारेमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण प्रष्ट हुदैन कांग्रेसको नीति के? नेत्रविक्रम चन्दजीहरुले गरेको हिंसा एकदमै अवैध हो कि हिंसा बन्द गरिनुपर्छ। कांग्रेसको आँखाले के ठहर गर्छ आउनुपरो। '
उनले हिंसा गर्नेचन्द समूह र हिंसा नगर भन्ने सरकारालई हेर्ने एउटै नजर भने कांग्रेस बेलैमा स्पस्ट हुनुपर्ने बताए। उनले हिंसाका बारेमा कांग्रेसको दृष्टिकोण प्रष्ट नभएको बताए। मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ' यदि दुवैलाई एकघानमा हाल्ने हो भने के कांग्रेस दिनभरी बीपी रातभरी विप्लव हो?'
'शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीति र आन्दोलन गर्न सबैलाई दिएको बताए। जबरजस्ती हिंसा हत्या,लुटपाट प्रयास गरेर अस्थिरता गराउने कुरामा कांग्रेसले बेलैमा स्पष्ट हुनुपर्छ,' मन्त्री बाँस्कोटाले भने।
प्रकाशित : असार २६, २०७६ १७:२७
असार २६, २०७६ रासस
काठमाडौँ — साँझ ६/७ बजेपछि सार्वजनिक सवारी नपाउने र पाए पनि भीडका कारण चढ्नै मुस्किल भइरहँदा काठमाडौँ उपत्यकामा भने रात्रिबस सेवा सुरु भएको छ । साझा यातायात सहकारी संस्थाले काठमाडौँका मुख्य सडकमा नमूनाका रुपमा गत साताबाट राति ९ बजेबाट रात्रिबस सुरु गरेको हुो ।
तीन रुटमा बस शुरु भएको संस्थाका व्यवस्थापक महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए । उनका अनुसार न्यूरोड गेटबाट नारायणगोपाल चोक हुँदै नयाँ बसपार्क, न्यूरोड गेटबाट त्रिपुरेश्वर हुँदै कलंकी र न्यूरोड गेटबाट नै नयाँबानेश्वर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नयाँ बसपार्कसम्म गरेर तीन रुटमा अहिले बस सुरु भएको छ । बस विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरेर पुनः न्यूरोड गेटमा नै फर्किनेछन् । यात्रुलाई रात्रिसेवाका बारेमा जानकारी नभएकाले अहिले यी बसमा यात्रु संख्या कम भएको उनले बताए । उनले भने, 'यात्रुले जानकारी पाएपछि विस्तारै बढ्दै जानेछ ।'
अहिले परीक्षणका रुपमा तीन वटा बसबाट सुरु गरिएकामा आगामी दिनमा रात्रिबस विस्तार गर्दै जाने संस्थाले जनाएको छ । संस्था गैरनाफामूलक भएकाले आगामी दिनमा यात्रुको सुविधाका लागि बस थप्ने र रुट अन्यत्र फैलाउने व्यवस्थापक पाण्डेयले बताए । उनले भने, 'हामीले यात्रुको सुविधालाई ध्यान दिएर सेवा थप गरिरहेका छौँ ।'
प्रकाशित : असार २६, २०७६ १६:३२
दुर्घटनापछि मात्रै छेकबार
भुक्तानी असारमै, काम अधुरै
१६ सय हेक्टर वन अतिक्रमित
प्रदेशसभा बैठक : स्थायी राजधानी र नामकरणले प्रवेश नपाउने
नुवाकोटको नदीमा दोहन जारी
मन्थलीमा ढल सडकमा